Imvula inqoba umdlalo wesine we-Women’s T20 e-Centurion
i-India women ingaphambili ngo-2-1 kwimidlalo emihlanu ye-Cricket South Africa (CSA) Women’s T20 series emuva kokuthi umdlalo wesine bedlala nama-Momentum Proteas uvalwe imvula e-SuperSport Park ngoLwesithathu.
Abavulayo be-South Africa, u-Lizelle Lee (58*) nokapteni u-Dané van Niekerk (55) baliqalise kahle iqembu labo nge-partnership yama-runs angu-103 emabholeni angu-75 ngaphambi kokuthi aphume u-Van Niekerk, onqakwe kwi-mid-off u-Rumeli Dhar kuphose u-Deepti Sharma phakathi ne-over yesi-13.
Oshaya kakhulu, u-Chloe Tryon usheshe wangena waba umdlali wesithathu emathembeni okuthi aqhubeke nomdlandla wakhe, kodwa u-Dhar uphinde wanqaka kuphosa u-Poonam Yadav, bamukhipha enama-runs amabili. u-Suné Luus usheshe wamulandela, waphuma enama-runs amahlanu, ekhishwa nge-lbw kuphosa u-Sharma oqede eno-2/33 kuma-overs amathathu.
Imvula iqale ukunetha emuva kokuthi u-Mignon du Preez (2*) ehlangane no-Lee, ongavumelanga ukuphuma kwama-wicket kumphazamise, wafinyelela ku-50 wakhe emabholeni angu-33 futhi kwagcina seku-58 emabholeni angu-38, okubalwa khona o-four ababili no-six abahlanu.
Impendulo ye-South Africa manje ukuzama ukulinganisa i-series uma sebedlala umdlalo wesihlanu futhi wokugcina e-Cape Town ngoMgqibelo, 24 February. Umdlalo uzovezwa ku-SuperSport 2 ngo-13:00.
February 24: Day @ 13h00 5th T20 International, PPC
Ama-Proteas esifazane alindele ukulinganisa i-T20 series Ishlanu sika-Ismail isiza ama-Proteas women agcine i-T20 series isaphila u-Raj no-Mandhana banqobisa i-India women ngendlela encomekayo i-India inqobe kumdlalo wokuqala we-T20 Ama-Proteas women azimisele ngokubuya Mandhana no-Yadav banqobela i-India women i-ODI series u-Mandhana, u-Goswami no-Pandey babeka i-India ngaphambili ngo-1-0 bedlala ne-Proteas women u-Van Niekerk ulindele ukudlala ekhaya i-CSA imemezela amaqembu ama-Proteas Women’s ODI ne-T20 bedlalela ekhaya ne-India i-CSA ihalalisela u-Van Niekerk no-Khuzwayo ngokuthola ama-SRSA Awards Ama-Proteas esifazane akhela kuhambo lwabo lwendebe yomhlaba